I-Sandisk iXpand yenza ukhuphelo logama i-iPhone yakho ihlawula | IPhone iindaba
I-Sandisk iXpand yenza ukhuphelo ngelixa i-iPhone yakho itshaja
Umkhwa wokudibanisa i-iPhone yakho ngentambo ye-USB ukuya kwikhompyuter ukwenza ugcino lwe-iTunes yinto ethi sonke siphulukane nayo. Uhlaziyo olwenziwe nge-OTA lulibalekile oko, kwaye ukunyuka komculo osasazayo kuyenze yaphelelwa lixesha i-iTunes. Nangona kunjalo, i-iPhone yethu iya ngokwanda ngokugcina idatha ebaluleke kakhulu ekufuneka igcinwe yogcino.
I-Apple inoxanduva lokuququzelela umsebenzi ngokugcinwa kwe-iCloud, kodwa i-5GB yasimahla inqabile kuninzi lwamatyala, ngakumbi ukuba sihlala sigcina iifoto kwisixhobo sethu. Kulapho izixhobo ezinje ngesiSandisk iXpand zenza ingqiqo, Ngokukhathalela ukuxhasa ngokuzenzekelayo zonke iifoto zakho, iividiyo, kunye nabantu onxibelelana nabo ngelixa ubiza kwisiseko esinye. Sizamile kwaye sixelela umbono wethu.
Isiseko sinoyilo olungenasidima, ngaphandle kwezinto ezinokukuphazamisa kwimisebenzi yaso yokuqala. Inesiseko sesinyithi esifumana kuso isinxibelelanisi se-microUSB kunye nendawo yokubeka ikhadi le-SD, kwaye kwinxalenye ephezulu ikhava yerabha emnyama esinokuthi sibeke kuyo, ukuba sinqwenela, i-smartphone yethu ukuze ikwazi ukuphumla ngelixa ihlawulisa kwaye yenza ukhuphelo. Ngaphambili sifumana indawo esigqitha kuyo i-USB ukuya kwimbane, engafakwanga ebhokisini
Le ntambo isonga ijikeleze isiseko, ifihlwe phantsi kwesiciko seplastiki, kwaye iqhagamshele kwi-USB embindini. Le iya kuba yintambo eya kusebenza kokubini ukubiza i-iPhone kunye nokuyivumelanisa kunye neapp kunye nokwenza ikopi yokulondoloza kwikhadi le-SD. Eli khadi lifakiwe ebhokisini, kwaye liya kuxhomekeka kumthamo esiwuthengileyo. Inyani yile yokuba ungathenga owona mthwalo usezantsi (32GB) kwaye usebenzise elinye ikhadi le-SD elingenangxaki, ngenxa yoko esi siseko siyandiswa ngokupheleleyo, kwaye iyaxatyiswa.
Akukho nto ingako sinokuyenza ukuze i-dock isebenze, vele ufake iplagi yethu kwi-cable ye-Lightning esiyisongele kwaye sayi-voila. Isicelo seSandisk iXpand Base esinokuyifumana kwi-iTunes siyakukhathalela konke okunye. Xa uvula usetyenziso kunye nefowuni eqhagamshelwe kwisiseko, iya kuqala ngokuzenzekelayo ukubuyisela zonke iifoto zethu, iividiyo kunye nabafowunelwa kwikhadi le-SD olifakileyo ngaphakathi kwesiseko.
Ukongeza kukuvumela ukuba uqwalasele ukuba yeyiphi idatha ekufuneka ikhutshelwe ekhadini, isicelo sikunika ulwazi malunga nendawo eseleyo kwi-iPhone yakho nakwikhadi le-SD ngokwalo. Inkqubo yokuqala yokukopa iyacotha, kuxhomekeke kwinani ledatha egciniweyo ekufuneka uyikope, Kodwa xa kwenziwe le backup yokuqala, ezinye iikopi zikhawuleza kakhulu. Eyona nto ilunge kakhulu kukuvumela yonke into yenziwe ebusuku, ngelixa iifowuni zihlawulisa, kwaye ke uyakulibala konke.
Zonke iifayile zakho ziyafikeleleka ngokugqibeleleyo kwikhadi le-SD ngayo nayiphi na ikhompyuter, kwaye zilungiselelwe ngokugqibeleleyo kwiifolda, ezilungelelaniswe ngumhla. Yindlela elula kakhulu yokwenza ilayibrari yakho yokufota kunye nevidiyo ihlelwe, kunye nokuba lilalela elilungileyo kwimeko enokuthi yenzeke, ngaphandle kokukhathazeka malunga nokusebenzisa iinkqubo zangaphandle, vele ufake i-iPhone kwisiseko se-iXpand. Ungasivula nesithuba kwi-iPhone yakho nje ukuba kugcinwa isipele, kunye nenketho yokuba isicelo sikunika "ukukhulula indawo" isusa zonke ezo zinto sele zingqamene. Insiza ikunika inketho yokubuyisela umxholo kwi-iPhone yakho.
IXpand Base nguSandisk ikunika ithuba lokwenza ugcino oluzenzekelayo ngelixa i-iPhone yakho ihlaziya kwakhona. Uncedo olunikezelwayo kunye nokucwangciswa kwazo zonke iifayile ngeefolda ezi-odolwe ngumhla, kunye nokubanakho kokubuyisela umxholo kwisicelo ngokwaso amandla aso aphambili. Isakhono sokwandisa amandla okugcina usebenzisa ikhadi le-SD luluncedo olukhulu, nangona ukhetho olungaqhelekanga xa unikezela ngeziseko zebrendi zomthamo omkhulu kwixabiso eliphezulu. Ngexabiso le- € 65 kwi Amazon Yinto enomdla kakhulu kwabo bangafuni ukuba nexhala lokwenza i-backups zemanyuwali, kwaye abafuni kuhlawula ukugcinwa okungaphezulu kwe-iCloud.
Ihlala kamnandi kwaye kulula ukuyisebenzisa
Intuitive kwaye ilula isicelo
Iifayile zilungelelaniswe ngokugqibeleleyo ngumhla
Ukubuyiselwa kwedatha kwisicelo ngokwaso
Ukubakho kokwandiswa kwayo nayiphi na i-SD
Intambo yombane ayifakwanga
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Sandisk iXpand yenza ukhuphelo ngelixa i-iPhone yakho itshaja
I-iPhone X ngoku inokuthengwa simahla ngaphandle kwe-SIM e-US
I-Instagram ibhengeza ukuba ine-akhawunti engaphezulu kwesigidi se-25